Soo -kabashada Suuqa Hoteelka: Eeg Jarmalka, Spain iyo Giriigga
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Yurub » Soo -kabashada Suuqa Hoteelka: Eeg Jarmalka, Spain iyo Giriigga
Jebinta Wararka Yurub • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Jarmalka Jebinta Wararka • Wararka Giriigga • Warshadaha Warshadaha • Hoteelada & Dalxiisyada • News • Dib-u-dhiska • jiga • Wararka Spain • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda
Qiimayaasha Hoteelku inta badan isma beddelin intii lagu jiray xiisadda COVID-19, khubarada warshaduhu waxay filayaan in si buuxda looga soo kabto suuqa hoteelka caalamiga ah marka la gaaro 2024.
Iyadoo inta badan hawlwadeennada hudheellada ay leeyihiin heshiisyo kiro oo dib -u -heshiisiin ah, khasaare weyn ayaa laga hortagay suuqyo badan.
Sahan ay samaysay Tranio ayaa iftiimiyay horumarka qaybta.
Bishii Agoosto 2021, Tranio waxay ku biireen xoogagga Madasha Maalgashiga Hoteelka Caalamiga ah (IHIF) si loo sameeyo sahan wadajir ah oo ku saabsan saamaynta masiibada adduunka ee COVID-19 ay ku yeelatay waaxda soo-dhoweynta tan iyo Maarso 2020, iyo inaan eber ka noqonno waxa aan ka filan karno suuqa horay u socda.
Sahanku wuxuu soo bandhigay in ka badan 160 xirfadlayaal warshadeed oo ka kala yimid Yurub oo dhan su'aalo loogu talagalay in lagu abuuro faham dhammaystiran oo ku saabsan rabitaanka cuntada, dareenka iyo arrimo kale oo saldhig u ah maalgashiga hantida maguurtada ee caalamiga ah tan iyo bilowgii masiibada.
Inta badan ka qaybgalayaasha sahanka (59%) waxay ahaayeen hanti ma guurto ah ama xirfadlayaal soo dhoweyn, 16% waxay ahaayeen hawlwadeenno huteel, 13% waxay isu aqoonsadeen maalgashadayaal. Qaybta 'Kuwa kale' (12%) waxay ka koobnaayeen xirfadlayaal kale oo warshadeed, sida lataliyayaasha maalgashiga, macalimiinta jaamacadda iyo suxufiyiinta.
Sahanku wuxuu daaha ka qaaday in khubarada badankoodu filayaan in warshadaha soo -dhoweynta ay soo kaban doonaan saddexda sano ee soo socota, inkasta oo xaaladda waddamada qaarkood ay ku xirnaan doonto heerka tallaalka. Jawaab bixiyaasha ayaa si weyn u dareemay in suuqyada Jarmalka, Isbaanishka iyo Giriiggu ay caddayn doonaan kuwa ka roon kuwa kale marka loo eego soo kabashada degdegga ah. Intaa waxaa dheer, kala duwanaanshaha jawaabaha jawaabeyaasha ayaa iftiiminaya bacda isku dhafan ee aragtiyaha hadda ka jira suuqa.
In ka Mareykanka 21 ka mid ah 25 -ka suuqyada hoteelka ayaa dib loo soo celinayaa.
52% ayaa rumeysan in suuqa hoteelka uu soo kaban doono marka la gaaro 2024
Intooda badan jawaabeyaasha waxay muujiyeen aaminaadda ah in suuqa martigelinta ay ku soo kaban doonto heerka dhibaatooyinka ka hor saddex sano gudahood. In ka badan kala bar-52%-ka-qaybgalayaashu waxay saadaalinayaan inay ku soo laaban doonto heerkii caadiga ahaa marka la gaaro 2024, halka 32% kale ay ku rajo weyn yihiin in arrimuhu dib ugu laaban doonaan heerarkii hore ee masiibada marka la gaaro 2023.
In ka yar 7% ayaa filanaya soo kabasho buuxda marka la gaaro 2022. Mid ka mid ah jawaabeyaashaas, Alexander Schneider oo ka socda Nikki Beach Hotels and Resorts, ayaa filaya in suuqa xilliga firaaqadu uu yeelan doono mid ka mid ah sannadaha ugu xoogga badan 2022. Laakiin kuwa kale ayaa aad uga taxadara saadaashooda. Mid ka mid ah jawaabeyaasha oo aan sheegin magacooda ayaa go'aansaday in hoteellada ku yaal waaxda dalxiiska ee weyn ay soo kaban doonaan oo keliya haddii qiimuhu kor u kaco oo moodooyinka hawlgalku is beddelaan.
Waxaa xusid mudan, hawlwadeennada hoteelku waxay u muuqdeen kuwa ugu rajada wanaagsan: 44% waxay u kala qaybsameen filashooyin ah soo kabasho buuxda sannadka 2023 ama 2024, halka 6% ay doorteen 2022 sidii sannadkii ay arrimuhu caadi ku soo noqon lahaayeen. Dhinaca kale, maal -gashadayaashu, waxay ahaayeen kuwo aad u taxaddar badan. Maalgashadayaasha badankood (87%) waxay filayaan soo kabasho saddexda sano ee soo socota mana jirto cid aaminsan inay dhici karto 2022.
Ka mid ah xirfadlayaasha guryaha iyo martigelinta, 51% waxay filayaan in suuqa uu soo kaban doono 2024, halka 35% ay rumeysan yihiin inay dhici doonto wax yar ka hor, 2023. Qiyaastii 5% waxay filayaan in suuqa uu ku soo laabto sidii caadiga ahayd 2022, halka 5% kale ay qabaan waxay dhici doontaa inta u dhaxaysa 2026 iyo 2030.
In kasta oo maalgashadayaasha badankoodu aysan filaynin soo kabasho degdeg ah, haddana badankoodu waxay rajo wanaagsan ka qabaan qaybta hudheelka sannadaha soo socda - waa isbeddel ay sidoo kale si cad u muujisay Insighting Insights Warbixin rubuca labaad ee 2021. Wadar ahaan 85% maalgashadayaasha, sida warbixinta lagu sheegay, waxay muujiyeen aragti maalgashi oo togan oo ku wajahan warshadaha hoteelka, halka 13% ay ahaayeen dhexdhexaad oo 2% oo kaliya ay ahaayeen kuwa aan fiicnayn. Aragtida Soo -dhoweynta ayaa la soconaysa dareenka iibsadaha iyo iibiyaha qeybta hoteelka tan iyo markii masiibada bilaabatay. Huteeladu waxay haystaan ​​liiska ugu sarreeya rubuc -saddexaad oo isku xigta oo ah fursadda maalgashi ee ugu wanaagsan 12 -ka bilood ee soo socda, waxaana ku xiga guryo la adeegto iyo goobo lagu nasto.
Xirfadleyda ayaa rumeysan in Jarmalka iyo Spain ay arki doonaan soo kabashada ugu dhaqsiyaha badan ee ganacsiga hoteelka
In ka badan saddex meelood meel (35%) jawaabeyaasha ayaa rumeysan in suuqa Jarmalka uu si dhaqso leh uga soo kabsan doono kuwa kale. Qaar ka mid ah 30% ayaa rumeysan in suuqa Isbaanishka uu sidoo kale si dhaqso leh u soo kaban doono.
Kuwa ka shaqeeya hoteellada, 31% waxay doorteen Jarmalka, 25% mid walbana wuxuu tilmaamay Greece, Italy, iyo Spain. In ka badan rubuc, 27% hantiilayaasha guryaha ama xirfadlayaasha soo dhoweynta ayaa u malaynaya in Giriigga uu noqon doono kan ugu dhaqsiyaha badan ee soo kabsada laakiin aqlabiyadda ayaa wali u codeysay Jarmalka iyo Spain.
In ka badan saddex-meelood laba maalgashadayaasha-69%-waxay muujiyeen kalsoonida ugu badan ee suuqa UK, halka inta soo hartay ay tilmaamayeen Jarmalka iyo Giriigga. Sida laga soo xigtay warbixintii ugu dambeysay ee STR, waaxda martigelinta ee UK waxay muujineysaa heerka soo kabashada ugu sarreeya ee Yurub, oo ay wadaan hudheelada firaaqada firaaqada.
Qaar ka mid ah jawaabeyaashaas, oo doortay "mid kale," oo lagu xusay faallooyinka Mareykanka, guud ahaan Aasiya, iyo gaar ahaan Turkiga iyo Shiinaha. Kirk Pankey, Madaxweynaha iyo Agaasimaha Sare ee Lagundi Hospitality, ayaa go'aamiyay in dalalka ugu tallaalka badan ay yeelan doonaan soo kabashada suuqa ugu dhaqsiyaha badan.
Qiimaha huteelku inta badan wali isma beddelin
Qiimaha wax iibsiga ee hoteellada ayaan weli waxba iska beddelin ama hoos u dhacay 5% ama ka yar, marka loo eego aqlabiyad aad u badan (78.6%) ee jawaabeyaashayada.
Marka la eego isbeddelka qiimaha, fikradaha kooxaha la daraaseeyay way kala duwan yihiin. Hawl -wadeennada hoteelku waxay ka koobnaayeen kooxda ugu niyad -xumada badan, iyadoo keliya 44% ay ku doodeen inaan qiimayaashu is beddelin ama ay hoos u dhaceen illaa 5%. Dhanka kale, 38% hawl -wadeennada ayaa rumaysan in qiimuhu hoos u dhacay in ka badan 15% ama xitaa 20%. Isla mar ahaantaana, 85% milkiilayaasha guryaha ama xirfadlayaasha soo dhoweynta iyo 81% maal -gashadayaasha ayaa qaba fikradda ah in qiimuhu aanu is -beddelin ama hoos u dhicin ilaa 5%.
Xogta tirada leh ee laga helay ra'yiururinta waxaa taageeray la -hawlgalaha maamulka Tranio George Kachmazov, kaasoo xaqiijiyay in ficil ahaan aysan suurta gal ahayn xilligan la joogo in laga iibsado guryaha hudheel tayo leh meelo wanaagsan oo qiimahoodu hooseeyo, inkasta oo ay weli taagan tahay xiisadda suuqa.
“Waxaa jira darawalo dhowr ah oo saameeya sicirka: Liquidity -ka suuqa ayaa ka muuqda shaxanka si ballaaran, taas oo ka dhalatay siyaasadda lacagta ee dowladaha. Bangiyada, yacni milkiilayaasha amaahda lagu hubiyay guryaha hudheelka, waxay daacad u yihiin mulkiilayaasha guryaha. Waxay inta badan ka fogaadaan inay la wareegaan dammaanad, iyagoo sidoo kale bixiya dib -u -dhigis deyn ah. Guud ahaan, si aad ugu iibsato hantida hudheelka maanta qiimo-dhimis adag (oo leh saami horumarineed oo saafiga ah oo ah 6% ama ka sareeya), waa in qofku eegaa mashaariicda meelo aan ku habboonayn, oo aan ahayn cabbir hay'adeed ama dayactir u baahan. Sidoo kale, hantida leh saamiga weyn ee dakhliga MICE hadda waxaa lagu iibsan karaa qiimo-dhimis ka badan 10-20% qiimaha iibka ka hor. Guryaha waaweyn ee ku yaal meelaha ugu sarreeya oo xaaladdoodu wanaagsan tahay, sicir-dhimista ugu sarreysa ee qofku heli karo waqtigan waa 5-7%, sida ku cad qiyaasahayaga, ”ayuu yiri Kachmazov.
Jawaab-bixiyeyaasha kale waxay tilmaameen inuu jiro farqi weyn oo u dhexeeya dalab-weydiinta qiimaha hoteelka. “Ka -reebista milkiilayaasha dhammaan taageerada dowladda waxay abuuri doontaa dib -u -habeyn raasamaal raasumaal iyo xanuun badan oo soo gala qaybta. Suuqa wax kala iibsiga ayaa weli ku jira dhaqdhaqaaq la hakiyay, ”ayuu yiri mid ka mid ah maalgashadayaasha.
Inta badan hawlwadeennada hoteellada ayaa codkooda dhiibtay waxay sheegeen inay dib uga wada xaajoodeen heshiisyadooda kirada
Sahankan ayaa sidoo kale muujinaya sida hawlwadeennadu uga jawaabeen masiibada. Badi dadka ka qaybqaatay sahanka (70%) waxay tilmaameen in hawlwadeennada ay dib uga xaajoodeen shuruudaha kirada. Hawlwadeennada laftoodu waxay doorteen ikhtiyaarkan qiyaastii 59% kiisaska, marka loo eego jawaabahayaga. Maalgashadayaasha, tiradaasi waxay ahayd 63% xirfadlayaasha guryaha, waxay ahayd 74%.
Natiijooyinka jawaabta 'Ma bixin ijaarka' waxay ku kala duwan yihiin ku dhawaad ​​laba arrimood: hawlwadeennada laftoodu waxay doorteen jawaabtaan kaliya 13% kiisaska, halka maalgashadayaasha iyo xirfadleyda hantida maguurtada ah ay jawaabtan bixiyeen 26% iyo 25% kiisaska, siday u kala horreeyaan .
Xalalka caanka ah ee hawlwadeennada inta lagu jiro masiibada ayaa sidoo kale u beddelay qandaraasyo isku dhafan iyo heshiisyo maareyn oo lala yeesho milkiilayaasha, iyadoo 34% iyo 9% dhammaan jawaabeyaasha ay bixiyeen jawaabahan, siday u kala horreeyaan. Isla mar ahaantaana, hawlwadeennada laftoodu waxay doorteen ikhtiyaarradan kaliya 18% (u beddel heshiisyada isku -dhafan) iyo 5% (heshiiska maamulka) ee kiisaska.
Huteelo badan ayaa u beddelay heshiisyada kiraystaha muddada-dheer iyo muddada fog inta lagu jiro masiibada
Ku dhawaad ​​kalabar, ama 41%, jawaabeyaasha ayaa rumeysan in hoteello badan ay u doorteen kireysiga bartamaha iyo muddada fog inta lagu jiro masiibada. Intaa waxaa dheer, 32% khubarada ah waxay rumeysnaayeen in huteelo badan loo beddelay goob shaqo, iyo 17%, inay fureen jikada rooxaanta ama bakhaarro mugdi ah.
“Isbeddelka weyn ee ka soo baxaya masiibada ayaa ah kor u kaca hoyga muddada-dheer iyada oo silsilado waaweyni ay beddelaan deeqdooda si ay u dejiyaan martida muddada-dheer,” ayuu yiri mid ka mid ah ka-qaybgalayaasha sahanka.
Kaliya 10.2% ayaa qiimeeyay in hoteello badan loo beddelay guryo hawlgab ah, in kasta oo dhowaan ay sii kordhayso baahida loo qabo guryaha waayeelka. Sida laga soo xigtay khabiirada Tranio, u beddelidda hoteellada guryaha hawlgabka si dhif ah ayay suurtogal u tahay sababo farsamo oo kala duwan ama meelo aan ku habboonayn.
Qaar ka mid ah milkiilayaasha guryaha ama xirfadlayaasha martigelinta ee ka mid ah jawaabeyaashayaga ayaa tilmaamay in hoteellada ay u wareegeen hoylaaweyaal hoy ah, ay bixiyeen hoy shaqaalaha daryeelka caafimaadka ama la furay xarumihii baaritaanka COVID. "Hoteellada badankood way xirnaayeen, in yarna waxay bixiyeen adeegyo dadweyne," ayay tiri Joan E. Capella, Agaasimaha M&A ee Iberolat Consulting & Investment.
Heerarka tallaalka oo la hagaajiyay ayaa horseedi doona soo kabashada suuqa hoteelka
Markii la waydiiyey waxa ay u malaynayaan inay horseedi doonto soo kabashada masiibada kadib, jawaabeyaasha ayaa si cad u tilmaamay heerka tallaalka. In kasta oo ay jireen dhowr su’aalood oo suurtogal u ah su’aashan, haddana 71% ka mid ah jawaabeyaasha ayaa ku dooday in heerka tallaalka uu noqon doono qodobka ugu macnaha badan. Dib -u -nooleynta dalxiiska caalamiga ah iyo dhaqaalaha adduunka ayaa ahaa jawaabaha ugu xigay kuwa ugu caansan, waxayna ahaayeen 58% iyo 46%, siday u kala horreeyaan. Intaa waxaa dheer, 23% waxay rumeysan yihiin in suuqa hoteelka uu ka heli doono dhiirigelin dib -u -soo -bandhigidda bandhigyada iyo dhacdooyinka ganacsiga. Mid ka mid ah khubarada ayaa xusay in dalxiiska ganacsigu uu soo kaban doono oo kaliya “marka xayiraadaha safarka la qaado oo haddii tirada dadka la tallaalay ay ka badato 80%.”
Mid ka mid ah jawaabeyaasha ayaa xusay tiknoolajiyadda aan taabashada lahayn iyo AI oo ka mid ah aaladaha wax ka beddeli kara 'dalxiiska iyo maskaxda martigelinta ee alaabta'.
Ka -qaybgalayaasha qaarkood waxay tilmaameen in taageerada dawladda, gaar ahaan Ireland iyo Slovenia, ay ka caawisay qaybta martigelinta inay ka badbaadaan waqtiyada adag. Wakiil ka socda wakaaladda guryaha ee Slovenia Investmond ayaa xustay in Slovenia muwaadiniinta ay heleen kuubannada gobolka oo u oggolaanaya hoteellada maxalliga ah inay 100% buuxsamaan. "Suuqa guryaha ma guurtada ah ee Slovenia wuxuu arkay qiimaha oo kordhay 40% laga bilaabo Jannaayo ilaa Ogosto 2021," ayay faallo ka bixiyeen.
"Fikradayda, marka laga soo tago soo kabashada dhaqaalaha guud, kordhinta dalxiiska qaranka ee waddammada ay ka kooban tahay waxay gacan ka geysan doontaa dib -u -soo -kabashada suuqa hoteelka laga bilaabo 2022," ayuu yiri Detlef Lauterbach oo ka tirsan DELA.
Annagu haddaan nahay Tranio waxaan sidoo kale rajo wanaagsan ka qabnaa soo kabashada meheradda hudheelka waxaanan raadineynaa fursad aan ku iibsanno hoteello yaryar oo u baahan dayactir qiimo dhimis ah oo aan u diyaarinno waqtiga soo kabashada suuqa - si aan u dayactirno, u tayaynno oo u adeegno digitalka.